भर्खरै नौ बर्षिय सचिन परियार वि’वाद पछि रु’दै मिडियामा, यसरी भन्दा कस्को मन नरोला र ! Sachin pariyar | Public 24Khabar
Home News भर्खरै नौ बर्षिय सचिन परियार वि’वाद पछि रु’दै मिडियामा, यसरी भन्दा कस्को...
भर्खरै नौ बर्षिय सचिन परियार वि’वाद पछि रु’दै मिडियामा, यसरी भन्दा कस्को मन नरोला र ! Sachin pariyar
भर्खरै नौ बर्षिय सचिन परियार विवाद पछि रुदै मिडियामा, यसरी भन्दा कस्को मन नरोला र ! Sachin pariyar
सरकारी कामकाजमा निक्लन पर्दा होस् वा बजार जाँदा, पश्चिम–उत्तरी दार्चुलावासीलाई तुइन नचढी धरै छैन । तुइनबाट महाकाली नदी तरेर भारतीय बाटो हुँदै उनीहरू सदरमुकाम पुग्छन् । व्यास गाउँपालिकाको धौलाकोटमाथिको क्षेत्रबाट सदरमुकाम पुग्न महाकाली तर्नैपर्छ ।
तर कोरोना महामारीका कारण चैत दोस्रो सातादेखि नै तुइन बन्द गरिएको छ । तुइन रोकिँदा त्यस क्षेत्रका करिब दर्जन गाउँका बासिन्दा अनकन्टार टापुमा बसेजस्ता हुन पुगेका छन् । ‘हाम्रा लागि तुइनको विकल्प छैन । सरकारले नेपाल–भारत सीमा नाका खोल्ने निर्णय गरेको सुनिन्छ, यहाँको तुइन पनि खोलिदिए हुने,’ व्यास–३ का रमेशसिंह कुँवरले भने ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो कार्यकाल (२०७२ साल) मै दुई वर्षभित्र तुइन विस्थापन गर्ने उद्घोष गरेपछि यहाँका बासिन्दा उत्साहित भएका थिए । तर तुइन विस्थापन गर्न यहाँ झोलुङ्गे पुल बनेनन् । उल्टै कोरोना महामारीमा तुइन पनि बन्द गरिएपछि दार्चुलावासी समस्या झनै चुलिएको बताउँछन् ।
सरकारले नभएको पुलभन्दा भएकै तुइन चढ्न दिए जाती हुने उनीहरूको भनाइ छ । ‘स्वदेशकै बाटो हिँडे सदरमुकाम पुग्न दुई दिन लाग्छ,’ व्यास–२ राप्लाका हरकसिंह बुढाथोकीले भने, ‘तुइनबाट भारत पुगेर मोटरमा जाँदा एक दिनमै सदरमुकाम पुगेर घर फर्किन सकिन्छ ।’
Previous article३ करोड नेपाली हर्षविभोर |कालापानी नेपालले फिर्ता पाउने|बरिष्ठ अधिबक्ता बालकृष्ण न्यौंपानेले देखाईदिए (जानकारीका लागि सेयर गराै)
Next articleकेक का*ट्दा बायस गरियो भन्दै बोले रबिन लामिछाने। बिमल माथि पुण्यको द’ह्रो झा*पड, सचिन र मलाइ हेप्ने